फेरि अर्को दुखद खबर ! श्रीमानले श्रीमतीलाई झुन्डाएर मारे | Butwal Dainik
फेरि अर्को दुखद खबर ! श्रीमानले श्रीमतीलाई झुन्डाएर मारे
तनहुँ जिल्लाको देवघाट गाउँपालिका वडा नं ५ मा ३६ वर्षकी मैनाकला चौधरी झु न्डिएर मृ त अवस्थामा फेला परेकी छिन् ।
आफ्नै घरमा पा सो लागेर म रेकी मैनाकलाका ४५ वर्षीय श्रीमान कुमार चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
त्यसै कान्छी श्रीमतीले आधा सम्पत्ति हडप्न खोजेको र यहि विषयले झ गडा हुने गरेको थियो ।
मैनाकलाले डिभोर्स दिन पनि खोजेको थिइन् तर अहिले यसरी पिङ खेल्ने डोरीमा झु न्डिएर म रेकी मैनाकलाको न्यायकोलागी माइती पक्ष आन्दोलन गरिरहेका छन् ।